Ny Voahangy any Atsinanana - NY FIVORIANA MANOKANA (Fizarana 2) - Ny Tany Masin'i Vietnam fandalinana
3216 Views Prof. Assoc. Hung Nguyen MANH
TUYET PHAN IZY
… Tohizo ny Fizarana 1:
Hanome fampahalalana bebe kokoa izahay aorian'ny fikarohana toy izao:
NY “HITCH-HIKE PASSENGER ”- NY TRANO TRANO telo
Ao amin'ireo vahoaka any Southward dia nisy ny "the Ogre telo kitapo”Fianakaviana. - Ilay “Ogre telo ambiny, miaraka amin'ny sofina sivy, maso lwclve ”. Iza io lehilahy io? Matoatoa ve izy sa devoly? Sa izy dia "olombelona et world an-tany manana maso eto an-tany". Izy no Andriamatoa. Pham Dang Hung - ny rain'ny mpanjakavavy - reny Tu Du, (ny vadin'ny mpanjaka Thieu Tri) - ny mpanjakavavy reniny. Na taiza na taiza nalehany dia nitondra "kitapo marobe" foana izy, izay misy karazan-voa rehetra mba hozaraina amin'ireo olona mahantra mba hahafahan'izy ireo mandamina ny fiainany milamina. Ny kitapo telo dia ireo "trano fivarotana varimbazaha finday" telo, izay niorina tamin'ny hevitra hananganana "orinasam-piaraha-monina" any amin'ireo vohitra sy kaomina mba hampitoniana ny mahantra raha sanatria potika ny vokatra; na izany aza, nasehon'ny mpanjaka ny tsy fankasitrahany. Miaraka amin'ny endriny lava sy lehibe an'ny lehilahy sandry dia noheverina fa hafahafa be izy toy ny sary sokitra hazo. Andriamatoa “Ogre tototra telo”Dia tsy vitan'ny hoe malaza eto amin'ny Mekong Delta, (P.10) Fantatra koa izy niverina tany amin'ny avaratra avaratra.
Sary 10: Tarika mozika klasika any South
Ny “kitapo telo” dia tsy misy dikany intsony satria kitapo misy voan-tsary ao anaty sary, fa ny kitapo azon'izy ireo kosa no voasambotra. Io lehilahy miady ho iray io dia lasa rakotry ny literatiora momba ny angano natolotry ny iray Henry Oger's4 asa - ny mpikaroka frantsay atsinanana nonina tany Hanoi nandritra ny taona 1908-1909. Ny sarin'ity lehilahy tsy manam-paharoa ity dia naseho tao anaty sangan'asany niaraka tamin'ny script demotic telo: “ONG BA BI".
Sary 11: Ireo ogre telo miangona
Ny asan'i Oger dia naseho tao amin'ilay sanganasa mitondra ny lohateny hoe “Sketch an'i Vietnam tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20"5. Indrindra, ity lohahevitra ity dia nanjary thesis Ph.D "Ny tantaran'ny kolontsaina"6. Ny asa "Ny teknikan'ny vahoaka An Nam" dia misy 4.577 sary sokitra vita amin'ny hazo Salan-tsarety voamarika miaraka amin'ny script Shinoa-Demotic nosoratan'i Henry Oger, mpikaroka frantsay tatsinanana tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19. Ity dia fantatra tamin'ny fomba Monografika. Izy rehetra dia mikendry ny hanangana rakitra amin'ny fiainana ara-materialy sy ara-panahy sy ara-tsaina an'ny vahoaka Vietnamese.
4. Henri Oger - Technique du Peuple Annamite (Kỹ thuật của người An Nam) - Henri Oger- Technique du peuple Anamite.
5. Nguyen Manh Hung- Sketsa tamin'ny fiandohan'ny 20th taonjato.
6. Nguyen Manh Hung - Ny fiarahamonin'i Viet Nam tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-20 - Fampianarana Ph.D momba ny kolontsaina - natolotra tao amin'ny Faculty of History - University of Hanoi Comprehensive - Ankehitriny fantatra amin'ny hoe The Social Science University.
◊ Ny Voahangy any Atsinanana - NY FIVORIANA MANOKANA (Fizarana 1)
◊ Taratasy sahisahy sy italy ary miloko no napetrak'i Ban Tu Thu.
◊ Sary 1, 2 - Loharano: Saigon - Ny Voahangy atsinanana - HUNG NGUYEN MANH, Profesora mpiara-miasa amin'ny dokotera momba ny tantara - TRUC NGUYEN PHAN SON.
◊ Sary asongadina - Loharano: AF Decoly - Alexandre Francis Decoly -
Andriamatoa Decoly dia manangona sarety paosin-kazo ary mamoaka sary - mainty sy fotsy sy miloko - ao Saigon tamin'ny 1905 ka hatramin'ny 1924 fa tsy mpaka sary izy fa mpandraharaha ihany. Sarin'ny paositry ny sarin'Andriamatoa Decoly misy mariky ny pagoda kely eo an-jorony ny orin'Andriamatoa Decoly, avy eo ny mariky ny tilikambon'ny tempoly dia lasa marika famantarana ny «Edition La Pagode Saigon». Araka ny Diary Taona Indochina tamin'ny taona 1910, dia nipetraka tao amin'ny 36 Legrand de la Liraye i Decoly, "Decoly, Emple de commerce" (izao arabe Dien Bien Phu) - Loharano: hiepblog.wordpress.com - Nguyen Duc Hiep, Scientist Atmospheric, Office of Environment & Heritage, NSW, Aostralia.
(Visited 1,784 fotoana, 5 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny Voahangy any Atsinanana - NY FIVORIANA MANOKANA (Fizarana 1)
Taom-baovao Vaovaom-piangonana VIETNAMESE ao ambadiky ny fiarahamonina VIETNAMESE tamin'ny faran'ny taonjato faha-19 sy fiandohan'ny taonjato faha-20 →
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (8,443)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (8,397)
INDRINDRA SADY ilaina hianarana ve i VIETNAMESE? (7,666)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (6,177)
Ny vondron'olona Vondron'olona 54 manana foko foko any Vietnam (5,793)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,736)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,113)
FIAINANA fohy momba ny SORATORANA FARANY VIETNAMESE - Fizarana 2 (4,917)
Miaramila sy basy (3,494)
Fitsidihana anio: 251
Andro farany 7 nitsidika: 2,568
Total visits: 433,417